Obere laptọọpụ: Chromebook kacha mma? Anyị na-enyere gị aka ịhọrọ
Akwụkwọ Chrome bụ ụdị pụrụ iche nke obere laptọọpụ emebere ka ọ dị mfe iji, nchekwa, kọmpat, nnukwu ibu na ọnụ ala. Anyị enyochala ụdị na ụdị wee kwubie na ha kacha pụta ìhè na ọnụ ahịa dị mma.
Otú ọ dị, dị ka ị ga-ahụ n'isiokwu a, Chromebooks adịghị mma maka onye ọ bụla. Ọnụ ego gị na-amalite site na 180 euro na, maka ego ahụ, ị ​​ga-enweta a Kọmputa na-arụ ọrụ zuru oke nke nwere ike ịrụ ọrụ kachasị mkpa na-arụ kwa ụbọchị: nchọgharị, ịlele email, nkwanye vidiyo, ige egwu, edezi ederede, wdg. Mana enwere usoro ọrụ ndị ọzọ Chromebook enweghị ike ịrụ, dị ka ọrụ chọrọ sọftụwia dị arọ, igwu egwuregwu vidiyo (maka nke a). enwere laptops egwuregwu) ma ọ bụ jikwaa Windows ma ọ bụ Apple software. Ọ bụrụhaala na ị na-eburu oke ndị a n'uche, ị ga-emekọrịta ihe na Chromebook gị..
Ọ bụrụ na ịchọrọ obere laptọọpụ nwere Windows ma ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ, tinye njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Nke ahụ kwuru, kedu Chromebook kacha mma nke oge a? Kedu ngwaọrụ ị na-enweta ego siri ike kwesịrị itinye na ya? Ọfọn, ịza ajụjụ ahụ n'ozuzu bụ ihe na-agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na mkpa onye ọrụ ọ bụla dị iche. Ụfọdụ ga-eji ogo ihuenyo kpọrọ ihe karị, ndị ọzọ na akwụkwọ ndetu dị gịrịgịrị ma dị ọkụ, ndị ọzọ na keyboard dị mma ma ọ bụ na batrị nwere ogologo ndụ. N'ihi nke a, Anyị enyochala ma tụnyere akwụkwọ Chrome kacha amasị nke oge a. Onye ọ bụla n'ime ha nwere uru na ọghọm ya na n'isiokwu a ị ga-ahụ ha niile.
1 Akwụkwọ chrome kacha mma
1.1 Uru kacha mma maka ego: Asus Chromebook
1.2 Ebe nke abụọ: Acer Chromebook
1.3 Toshiba Chromebook (inch 13).
1.4 Dashi: The ama Macbook
2 Kedu ihe ị ga-ama maka obere laptọọpụ?
3 Nkwubi okwu gbasara chromebooks
Akwụkwọ chrome kacha mma
Na-esote, anyị na-edepụta ngwa ngwa ndị anyị na-atụle akwụkwọ Chrome kacha mma nke oge a, jide n'aka na, n'agbanyeghị mkpa gị, ị ga-ahụ ezigbo n'etiti ha. Mana tupu ịbanye n'ime ụdị nke ọ bụla, ka anyị jiri ntụnyere ngwa ngwa gaa:
Asus Chromebook tụgharịa ...
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ n'ezie bụ a Laptọọpụ dị obere ma dị mfe mana anaghị arụ ọrụ na ChromeOS mana na Windows ma ọ bụ macOS, anyị na-ahapụrụ gị nke a ọzọ ntụnyere laptop.
Biko mara na nhazi na ọnụ ahịa nwere ike ịdịgasị iche ka oge na-aga, Ọ ka mma ka ị tinye njikọ nke ụdị ọ bụla iji mee ka ozi ahụ dị ọhụrụ. Anyị edepụtala ọnụahịa nke ụdị isi nke otu ọ bụla, mana ihe dị mma bụ na ụdị laptops ndị a nwere ọnụ ahịa erughị 500 euro ya mere ha dị mma maka mmefu ego niile. Anyị ga-ahụ ndị kacha pụta ìhè na ntakịrị nkọwa.
Uru kacha mma maka ego: Asus Chromebook
Asus na-enye Chromebook kachasị ọnụ n'ahịa n'oge edere. Ọkwa ntinye ha Z1400cn na-amalite na ihe na-erughị $ 300, maka ọnụahịa ahụ, ị ​​ga-enweta laptọọpụ inch 11 gbakọtara nke ọma nke dị ike.
Ọ nwere ọgbọ ọhụrụ nke processors Intel Celeron (1.6 GHz, ruo 2.48 GHz), nke bụ ihe ọtụtụ Chromebooks nke nha a na-enyekarị. Ọ bụrụ na nke a ezughị gị, ọ nwekwara 4 GB nke RAM dị na nhazi ya, enwere ọtụtụ ihe na ngwaahịa na ngwaọrụ adịghị ọnụ maka ya. RAM bụ enweghị upgradeable, ma M.2 nchekwa mbanye bụ pụtara mfe swap pụọ maka ibu otu ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Akụkụ dị iche iche, Asus Chromebook ọ bụ kọmpụta arụpụtara nke ọma, dịkwa fechaa. Akpa isi awọ ya dị mma mana ụfọdụ nwere ike ịhụ na ọ na-agwụ ike. Anyị ekwenyeghị na 60692 adịchaghị mma karịa akwụkwọ Chrome ndị ọzọ dị na ahịa. N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ a nwere ihuenyo matte dị mma (panel TN, 1366 x 768 pikselụ), ezigbo keyboard na trackpack, na nhọrọ dị mma nke ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ (HDMI, 1x USB 2.0 na 1 x USB 3.0 na XNUMX x USB XNUMX). onye na-agụ kaadị). N'ihe gbasara ndụ batrị, ọ dị ihe dịka awa asaa.
Na nkenke, o siri ike ikwu ihe ọjọọ gbasara laptọọpụ a, ọkachasị n'ịtụle ọnụ ahịa ya. Nke ahụ gbasara ụdị nke bụ isi, ọ bụrụ na ịchọrọ ike kachasị ike, anyị na-akwado ka ị lelee onyinye ndị anyị depụtara.
N'ikwu okwu banyere ụdị Asus Chromebook, anyị ga-ekwu na ihe nlereanya a dị na ọcha ma ọ bụ isi awọ mara mma, ọ na-abịa na 32 GB nke nchekwa na ndabara. Ọ ka nwere TN panel, otú ihuenyo àgwà adịghị mma nke ukwuu n'elu gara aga ụdị (n'ezie, kpughere na-egbuke egbuke ìhè, ọ na-ele anya njọ n'ihi na echiche na kenkowaputa elu), ma ọ bụrụ na-amasị gị ọcha na-emetụ ihuenyo nke. Laptọọpụ gị, ihe nlereanya a bụ otu n'ime akwụkwọ Chrome ole na ole ga-ekwe ya.
Ụdị isi nke Asus Chromebook nwere ọnụ ahịa akwadoro nke euro 350, mana ị nwere ike ịchọta ihe dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịzụrụ ya n'ịntanetị..
Ebe nke abụọ: Acer Chromebook
Ọ bụrụ na anyị ga-ahọrọ akwụkwọ Chrome kacha mma 13,3-inch nke oge a, a ga-enwe ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti Medion a kọwara n'elu na nke a. Acer Chromebook CB3. Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị ọnụ karịa MD 60692 na ọ siri ike ịchọta ya na Europe, ma. n'ọtụtụ ụzọ ọ bụ nkwalite karịa ụdị Mediion.
Ụdị nke bụ isi nwere otu njirimara dị ka Asus: 4 GB nke RAM, ọ bụ ezie na nhazi dị iche: Mediatek na 4 cores na 2,1 Ghz na 32 GB nke nchekwa SSD. Maka ntakịrị ego ị nwere ike nweta nhazi RAM dị elu. N'iji ya eme ihe kwa ụbọchị, Acer na-agba ọsọ na ọbụna karịa AsusỌ bụrụhaala na ị naghị ebufe ya, ọ na-ejikwa ụgwọ elekere 9-10, nke na-etinye ya n'isi nke Chromebooks dị na ahịa ugbu a.
E wezụga nke ahụ, ndị Acer Chromebook CB3 Ọ nwere ihe owuwu siri ike yana ntụkwasị obi nke ukwuu, mana ọ dị arọ ma sie ike karịa akwụkwọ Chromebook 13,3-inch ndị ọzọ. (1.49 Kg. Na 1,9 cm. Oke) tumadi n'ihi nnukwu batrị ya. Nhọrọ ọdụ ụgbọ mmiri dịkwa mma, ọ nwere oghere 2 USB 3.0 (ebe ọtụtụ asọmpi ya nwere otu ma ọ bụ enweghị). Ọzọkwa, ma keyboard na trackpad dị mma.
Otu n'ime ụdị kachasị ewu ewu na anyị atụnyere ụdị laptops.
Banyere ihuenyo, ọ bụ ihe nkịtị na kacha mma. Ogwe TN na mkpebi ya nke 1920 × 1080 pikselụ na-etinye ya n'elu Acer na ọtụtụ obere laptọọpụ 11-inch, ọ bụ ezie na njedebe ya na-egbuke egbuke ga-ewe iwe ma ọ bụrụ na ekpughere ya na ọkụ siri ike.
Na nkenke, ị ga-ahọrọ nke Acer Chromebook CB3 ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ kọmpụta siri ike, ngwa ngwa 13,3-inch nwere ogologo ndụ batrị. Nhazi 4GB RAM na-atọ ụtọ n'ezie, ebe ọ dịghị mfe ịchọta akwụkwọ Celeron Chrome nwere RAM karịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ Chromebook dị nro, dị fechaa ma na-enweghị mmasị na ndụ batrị ma ọ bụ nkwụsịtụ, ị ga-ahụ nhọrọ ndị dị ọnụ ala karịa.
Toshiba Chromebook (inch 13).
Ọ bụrụ na ị gụọla ntụnyere akwụkwọ Chrome anyị, ị ga-ahụ na otu n'ime ụdị ndị a nwere ike ịdị mma dị ka laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ ndị bu n'obi iji ya eme ihe. N'ọgbaaghara nke igwe anyị atụlewo na Toshiba Chromebook bụ mejor n'ụdị a. Nwee a nnọọ ìhè na ebughibu imewe ihe na-eme ya zuru oke maka njem na njem soro gi n'ebe obula igara
Laptọọpụ kọleji a na-eji sistemụ arụmọrụ Chrome OS, nke dabere na ihe nchọgharị weebụ Chrome. N'ihi nke a ị ga-achọ ịntanetị iji ya, ma na-eche banyere ya na ịbụ ebumnobi, anyị na-eche na ọ dịghị anọchi anya a nnọọ nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ọ na-nyere nanị ojiji na ngalaba ebe ọ bụ na a ga-enwe mgbe nile internet dị. Echeghị m na ị ga-ewega ya n'ọhịa ... A price-akwụ ụgwọ karịa ọnụ maka ihe ọ na-eri.
Banyere nkọwapụta ya, ọ na-eji Intel Celebron N2830 processor nke 4GB nke RAM kpuchie, nke ga-abụ. ike zuru oke iji kpuchie omume ndị dị mkpa. Site na okike na edezi na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ọ nweghị ikike nke ụfọdụ kọmputa maka ụmụ akwụkwọ mahadum, ma ka anyị kwuo na ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mfe na isi m nwere ike ịkwado nke a.
Ị ga-enwe ihe niile ị ga-achọ gụnyere a Ihuenyo IPS dị elu nwere mkpebi 1920 x 1080 na a ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri njikọ iji jikọọ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ a na ọtụtụ ngwaọrụ. Ihe ị ga-achọ n'ihi ntakịrị ebe nchekwa dị n'ime o nwere, ụdị nke Chromebooks.
O siri ike, ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, onye edemede ma ọ bụ onye chọrọ ihe kachasị mkpa na-enweghị akwụ ụgwọ, a na-atụ aro ya. Ọ bụrụ na ịchọghị itinye ngwa ma ọ bụ mmemme maka klaasị, ị gaghị enwe nsogbu.
Ezigbo ihe: Ezigbo ihuenyo. HD ọdịyo dị mma. Ọnụ ala dị ala ma mara mma. Batrị nke ihe dịka awa 9, karịa nkezi.
Ihe ọjọọ: Ihuenyo adịghị emetụ aka. Ọ bụghị adabara nke ukwuu na-achọsi ike ojiji.
Dashi: The ama Macbook
Nkebi a bụ ihe mgbakwunye n'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike imeli ya, na agbanyeghị na anyị edepụtaburu ndị kachasị ama ma ọ bụrụ na ị nwere a nnukwu mmefu ego ma ịchọrọ ahụmịhe onye ọrụ kacha mma, anyị ga-agwa gị ka ịzụrụ ihe a na-ekwu maka Macbook.
2020 Apple MacBook Ikuku ...
E jiri ya tụnyere kọmpụta ndị gara aga, Macbook Air 12-inch na-abịa na nke ya sistemụ arụmọrụ Anyị na-adọla gị aka na ntị na ọ bụrụ na ịzụtara ngwaọrụ Apple ma emechaa, ị chọghị ihe ọ bụla ọzọ. Ee, ha dị ọnụ karịa, ma atụmatụ ndị dịkwa elu. Dị ka anyị na-ekwu, anyị na-ahapụ ya ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụle ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ naanị iji ya maka ọrụ ma ọ bụ arụ ọrụ dị ọcha ịkwesighi imefu nnukwu ego.
Kedu ihe ị ga-ama maka obere laptọọpụ?
Tupu abanye n'ime nkọwa, Anyị ga-achọ ịkọwapụta ihe abụọ dị mkpa ka ị mara gbasara akwụkwọ Chrome ka i wee nwee ike jiri ozi niile enwere ike mee mkpebi ịzụrụ gị (ọ bụrụ na ị maralarị Chromebooks ị nwere ike ịgafe ngalaba a):
Akwụkwọ Chrome anaghị arụ ọrụ na Windows ma ọ bụ Mac Os ma ọ bụ enweghị ngwanrọ ọ bụla emebere maka nyiwe ndị ahụ. Chromebooks na-arụ ọrụ Chrome oS, sistemụ arụmọrụ dabere na ihe nchọgharị Google Chrome. Ọ bụrụ na ị maara ka o si arụ ọrụ, ị ga-enweta Chromebook n'oge adịghị anya. The interface bụ minimalist, ị gaghị na-emeso mmelite, nje ma ọ bụ ndị ọzọ na-ewe iwe, nanị ị ga-etinyere ngwa ndị ị chọrọ na ngwa ụlọ ahịa, yiri otú ị ga-eji mbadamba ma ọ bụ a Smartphone.
Akwụkwọ Chrome bụ kọmpụta nwere ike dị ala ezubere maka ọrụ ndị bụ isi. Ha adịghị enwe ike ijikwa egwuregwu dị ike ma ọ bụ sọftụwia pụrụ iche, ebe ọ bụ na emebereghị ihe ndị a maka Chrome OS. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị a nwere ike ịrụ ihe karịrị otu ọrụ n'otu oge, ọ ka mma ịghara ịmanye ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Akwụkwọ Chromebook na-adịkarị obere, kọmpụta kọmpat, na ihuenyo nke 11,6 ma ọ bụ 13,3 sentimita asatọ, n'agbanyeghị na e nwere ụfọdụ ibu ụdị.
Akwụkwọ Chrome, n'ọtụtụ akụkụ, dabere na ịntanetị. Ma Chrome OS, dịka ọtụtụ ngwa dabere na igwe ojii, yabụ ha chọrọ njikọ na-arụ ọrụ iji nweta data na sava. Agbanyeghị, ị nwekwara ike iji Chromebooks na-anọghị n'ịntanetị, n'agbanyeghị na ọ nwere oke ọrụ. Ngwa ndị a na-enyekarị obere nchekwa nchekwa (16 ruo 32 GB), nke nwere ike zuru ezu maka ihe gị niile (ihe nkiri, faịlụ, egwu, wdg). Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ngwaọrụ gị na-eme njem dị ukwuu, ọ ka mma ka ị tụlee ịzụrụ ihe nlereanya 3G / 4G.
Maka ihe niile dị n'elu, ị ga-enyocha ma chromebook ọ bụ kọmpụta kacha mma maka gị ma ọ bụ n'ụzọ megidere nke ahụ, ịchọrọ obere laptọọpụ dabere na ntakịrị ntakịrị na ịntanetị ma na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ndị ọzọ na-anọghị n'ịntanetị.
Dị ka a nnọọ mma n'ókè bụ ya price na ọ bụ na ha na-eri ihe na-erughị ọtụtụ ndị ugbu a mbadamba na ahịa na-ekwe ka ojiji nke ọtụtụ ndị ọzọ ọkachamara ụlọ ọrụ ngwa maka.
Ọzọ, anyị ga-ekwu maka ụdị obere laptọọpụ kacha dị ọnụ ala ma dị mma.
Nkwubi okwu gbasara chromebooks
Mgbe okwu ndị a gasịrị, anyị ga-achịkọta ntakịrị nkwubi okwu anyị gbasara akwụkwọ Chrome. Ọ bụrụ na ị na-achọ Chromebook zuru oke, dobe ya, ị gaghị ahụ ya. Enweghị ngwaọrụ (ma ọ bụ laptọọpụ, ekwentị, mbadamba ...) ya bụ. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ Chromebook na-abịaru nso.
Ọ bụrụ na anyị na-elekwasị anya na obere 11 inch, Acer Chromebook C720 lineup na-enye nnukwu ego maka obere ego. ma nke ahụ bụ ihe kpatara na ọ bụ otu n'ime ndụmọdụ anyị. Nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Dell Chromebook 11, ọ dị ntakịrị ntakịrị, na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, n'agbanyeghị na ọ dị oke ọnụ ma sie ike ịchọta na Europe. Banyere Asus Chromebook C200, o nwere ike zuru oke iji rụọ ọrụ gị bụ isi, yana ịbụ laptọọpụ dị jụụ na nke na-arụ ọrụ nke ọma. N'ikpeazụ, Samsung Chromebook 2 11.6 na-ele anya ma dị egwu, mana ọ dị oke ọnụ na enweghị ike ịkwado ọkwa dị elu na ndepụta ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ chrome buru ibu, nhọrọ anyị ga-abụ HP Chromebook 14, Toshiba Cromebook CB35, yana Asus Chromebook C300 mara mma (enweghị ofufe).. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-adọrọ mmasị ịghara ileghara Samsung Chromebook 2 13.3 anya dị ka ọ nwere ọtụtụ atụmatụ, ahụ dị nro, ogologo ndụ batrị, 4 GB nke RAM na ihuenyo 1080p. Na ihe niile maka ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Ọ bụ ezie na ngwa ngwa ngwa ya nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike maka onye ọ bụla na-achọ ọsọ. Nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ Chromebook Pixel, ngwaọrụ na-adọrọ mmasị, n'agbanyeghị na ọ dabara nke ọma maka laptọọpụ Chrome OS.
Na nkenke, Akwụkwọ Chrome dị ka ọ bụ ezigbo ndị enyi njem ma ọ bụ obere laptọọpụ kacha mma maka ụmụaka. A na-akwadokwa ha nke ukwuu maka ndị ọrụ chọrọ naanị ịnyagharị ịntanetị, lelee email ha, kpọọ ọdịnaya multimedia, wdg. Ịkwụ ụgwọ n'etiti euro 180 na 270 maka otu n'ime ngwaọrụ ndị a karịrị ihe ziri ezi.
Kwụ ụgwọ mba, karịa ihe ọ bụla n'ihi na ị nwere ike nweta laptọọpụ Windows dị mma, ma ọ bụ ọbụna abụọ n'ime otu dị ka Asus Transformer Book T100, maka ihe na-erughị 400 euro. Enwere ike ịrụ ụka na akwụkwọ Chrome na-adịkarị mfe iji, kọmpat karịa na enweghị nsogbu karịa Windows PC ọ bụla, ma ị ga-adị mma ruo otu isi, mana ị ka ga-adị mma ruo otu isi. Mana a ka nwere oke ụfọdụ gbasara akwụkwọ ndetu ndị ka dị ike.
Site na nke a, anyị na-emechi nyocha anyị nke akwụkwọ Chrome kacha mma dị ugbu a. Anyị na-emelite ozi mgbe niile, yabụ nọrọ na nche maka ozi ndị ọzọ. Ah! Ma ọ bụrụ na akụkọ a bara uru nye gị, biko kesaa ya Ma, n'ezie, ngalaba nkọwa ghere oghe nye onyinye ọ bụla ị nwere ike inye anyị.
Laptọọpụ Linux. Kedu nke a ga-azụta?
Akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala
Laptọọpụ nwere SSD
2-na-1 laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe
Laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Akwụkwọ Ultrabook dị ọnụ ala
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Chromebook